“ခေါက်ဆွဲအစုံသုတ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ခေါက်ဆွဲအစုံသုတ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ်´´
Posted by ခင်ခ on Jun 26, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Politics, Issues | 30 comments
အင်တာနေရှင်နယ်ဘာသာသင် ကျောင်းတစ်ခုရဲ့ မုန့်ဈေးတန်း(ကန်တင်း)မှာရှိတဲ့ ရေခဲမုန့်၊ အအေးရောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားလေးများ ညနေကျောင်းဆင်းချိန်မှာ အိမ်မပြန်မှီ ဖယ်ရီကားမထွက်မှီ မုန့်လာဝယ်စားကြတဲ့အခါ
ကျောင်းသား – “အန်တီ သားကို စတော်ဘယ်ရီ ရေခဲမုန့်တစ်ခုပေးပါ´´
ဈေးသည် – “အေးရမယ်သား´´
ကျောင်းသား – “အန်တီ ရေခဲမုန့်အလုံးကို ဝေဖာ ကတော့ပေါ်မှာ အန်ကိုက်လေးဖြစ်အောင် သေချာ တင်ပေးပါနော်´´
ဈေးသည် – “အေးပါသားရယ် သေချာကွက်တိ တင်ပေးလိုက်မယ်´´
ကျောင်းသားလေးရေခဲမုန့်ဖိုးလှမ်းယူပြီး မုန့်လှမ်းပေးရင်း ဈေးသည်ကြီးရဲ့အတွေးမှာ
“ဂျပန်လူမျိုးလို့ မပြောရဘူး တိကျသေချာ စနစ်ရှိတာ ကြိုက်လိုက်တာ ဒါကြောင့်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် ပစ္စည်းတွေက သူနေရာနဲ့သူ အံဝင်ဂွင်ကျထွင်ကျတာနေမှာ´´
ကျောင်းသား – “အန်တီ သားကိုချောကလက် ရေခဲမုန့်တစ်ခုပေးပါ´´
ကျောင်းသား – “အန်တီ ရေခဲမုန့်ကို အဲဒီဝေဖာထဲ ၀င်နိုင်သလောက်ဖိထဲ့ပေးနော်´´
ဈေးသည် – “အဲလိုကျဘယ်လှတော့မလဲ ဝေဖာကန်တော့လေးပေါ်မှာ အလုံးလေးတင်ထားမှ လှမှာပေါ့´´
ကျောင်းသား – “ဟာ အန်တီကလည်း ဘာသိလို့လဲ အပြင်မှာဆိုတော့ စားရင်းနဲ့ပျော်ကျပြီး အောက်ကို တစ်ချို့အစက်တွေကျလာတော့ နှမျောစရာပေါ့´´
ဈေးသည် – “ဟုတ်ပါပြီ သားလိုချင်သလို အန်တီထဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်´´
“ဒါကြောင့်လည်းရှေးလူကြီးတွေက ကုလားလိုစုလို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်မယ် အောက်ကိုပျော်ကျပြီးမစားရမှာ နှမျောနေတာလေ´´
ကျောင်းသား – “အန်တီ သားကိုနို့ရေခဲမုန့်တစ်ခုပေးပါ´´
ဈေးသည် – “အေးကွယ်ရပါမယ့်´´
ကျောင်းသား – “အန်တီက ရေခဲမုန့်တစ်ခုဝယ်ရင် ဝေဖာမုန့်တစ်ခု အပိုလက်ဆောင်ဘာလို့မပေးတာလဲဟင်၊ သားက ဟိုရှေ့ဆိုင်က၀ယ်စားနေကျ အခုသူ့ဆိုင်ကကုန်သွားပြီးပိတ်သွားလို့ အန်တီဆိုင်ကလာဝယ်စားတာ´´
ဈေးသည် – “သားစားကြည့်ပါအုံး အန်တီဆိုင်က ရေခဲမုန့်အရသာက အခြားဆိုင်ကရေခဲမုန့်အရသာနဲ့ မတူ ပါဘူး၊ အန်တီက သူ့ထဲမှာထဲ့ရမယ့်အမျိုးအစားတွေကို မခိုဘဲအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတာပါ´´
ကျောင်းသား – “အန်တီကလည်း မုန့်လုပ်တဲ့ထဲ ထဲ့ရမယ့်အမျိုးအစားရဲ့ ကွာလတီလေးကို ဟိုနည်းဒီနည်းလျော့ လိုက် အဲလိုလျော့လို့ပိုထွက်လာတဲ့အရင်းထဲက တ၀က်ကို လက်ဆောင်ပိုမိုရှင်းဆိုပြီးတွဲပေးလိုက် ခုန ဝေဖာ တစ်ခု ပိုပေးသလိုပေါ့ ဈေးသက်သာအပိုလည်းရတော့ အဲဒါဆို အန်တီဆိုင်လည်းဟိုဆိုင်လို အစောကြီးရောင်း ကောင်းပြီးကုန်မှာပေါ့´´
ဈေးသည် – “ဟုတ်ပ့ါသားရယ် အန်တီပြန်တွက်ကြည့်ပါ့မယ်´´
သြော် တရုတ်ကလေးလို့မပြောရဘူး ဒီအရွယ်လေးနဲ့စီးပွားရေးဈေးကွက်မြင်တတ်ပါပေ့၊ ဘာတဲ့ကွာလတီ လေးလျော့ ဈေးလျော့ကာအပိုလည်းပေးဆိုဘဲ ဒါကြောင့်လဲ တရုတ်ပစ္စည်းတွေ ဈေးကလည်းပေါ ဈေးကွက်ထဲ များများရောက် ထိုးဖောက်နိုင်တာကိုး။
ကျောင်းသား – “ အန်တီ ရေခဲမုန့်က ဘာတွေရှိတာလဲ´´
ဈေးသည် – “စတော်ဘယ်ရီ ချောကလက် နို့ သုံးမျိုးရှိတယ် သားက ဘာစားမလဲ´´
ကျောင်းသား – “သားကို အဲဒီ သုံးမျိုးစလုံးထဲ့ပြီး ရေခဲမုန့်တစ်ခု ပေးလို့ရမလား အန်တီ´´
ဈေးသည် – “ရတော့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် သုံးမျိုးလုံးရောလိုက်တော့ တစ်ခုစီရဲ့အရသာ ဘယ်ရှိတော့မလဲ´´
ကျောင်းသား – “ရတယ်အန်တီ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင် ငါက စတော်ဘယ်ရီ ချောကလက် နို့ သုံးမျိုးလုံး စားခဲ့တာလို့ ကြွားရရင်ပြီးရောဗျာ´´
ဈေးသည် – “ဟုတ်ပါပြီ သားစိတ်တိုင်းကျ ရောင်စုံရေခဲမုန့်ပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား´´
“အင်း မြန်မာကလေးများ အရသာရှိတာမရှိတာအသာထား ကြွားရပြီးရော အစုံတန်အောင်လိုချင်တတ် ပါလားနော်´´
“အဲဒါမြန်မာကွ´´ လို့ကြွေးကြော်လိုက်ရမလိုပါဘဲ အခုလတ်တလော ပြင်ပအခြေအနေကိုလည်း ခင်ခ လေ့လာမိ သလောက် တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ ဒီမိုကရေစီကလည်းလိုချင်သေး ကုလားကိုလည်းမောင်းထုတ် ချင်နေသေး တရုတ်တွေလုပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေလည်းရပ်လိုက်ချင်သေး ဘာသာသာသနာအကြောင်းပြုဥပဒေ လုပ်ကာ သာသနာကလည်းပြုချင်သေး စစ်အစိုးရအနွယ်သမ္မတနေရာမှာလည်း လူလဲလိုက်ချင်သေး တကယ့် ကိုဘဲ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တွေ တစ်ပြိုင်နက်ထဲဖြစ်ချင်တာတွေ စုကာတောင်းဆိုမယ်ဟ ဆိုသလိုပါဘဲ ခုန ရေခဲမုန့်ဈေးရောင်းတာလေးကြည့်ပြီးစဉ်စားနေတုန်း ဘေးစားပွဲကိုရောက်လာတဲ့ မြန်မာကလေးတစ်သိုက် မှာလိုက်သံက “အန်တီကြီး သမီးတို့ကို ခေါက်ဆွဲအစုံသုတ် လေးပွဲ ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ်နော် ´´ တဲ့။
လေးခရဲ့ ဥပမာကိုတော့ အရမ်းကြိုက်သွားပြီ ………
တောင်ထိပ်ကို ရောက်ချင်ဇောနဲ့ နင်းကန်ကာအပြေးတက်ရင် တောင်ထိပ်မရောက်မှီ
အမောစို့နေကြမှာ စိုးလို့ပါ စနေ ရေ။ ကနဦးဖတ်ကြောင်းပြောလာလို့လည်း ကျေးဇူးပါလို့။
ခေါက်ဆွဲသုတ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ် စားချင်တယ်။
မန်းလေးပြန်လာရင် လိုက်ကျွေးပါ။ ဒါပဲ။
အဲ မမလေးလည်း ခေါက်ဆွဲသုတ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ် ကို ကြိုက်သကိုး။
လာမယ် လာမယ်နဲ့နော် မျှော်ရသူလည်း မောပါပေါ့ကွယ်။
မန်း ပြန်လာဖြစ်ရင် ဆုံကြ ပြောကြ ဟားကြတာပေါ့ဗျာ။
အတွေး လေး အရေးလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ခေါင်းစဉ်ကြည့် သွားရည်ကျ အပြီး ” ခေါက်ဆွဲအစုံသုတ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ်” ဒီ တစ်ပါတ် တကယ်လုပ်စားဖို့ အကြံရသွားတယ်။
ကျွန်မလဲ မြန်မာဘဲ။ ခေါက်ဆွဲအစုံသုတ် သံကြားရင် ကို ခေါင်းထောင်ကြည့်မိတော့တာ။
အရီးရေ မြန်မာတွေ ခေါက်ဆွဲအစုံသုတ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ် စားတာတော့ စားတာပေါ့ တန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုသလို တစ်ခါတလေတော့လည်း ချင့်ချိန်စားသင့်တာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်နော့။ အချိန်အခါလေး ကြည့်စားကြစေလိုပါတယ်။ ဥပမာ – ရုံးသွားမယ့်မနက် ခေါက်ဆွဲအစုံသုတ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ် ကို အလွန်အကြူးစားမိရင် မခန့်မသင့်က ရုံးမှာ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်မှာမျိုးပေါ့လေ။
အတွေးလေး..ဆက် ပြ သွားတာ သဘောကျတယ်.လေးလေးခရေ..။
သားသားတို့လို မကြိုက်တဲ့သူလည်း ရှိတတ်ပါတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ အများကတော့ စားမယ်ထင်။
ရှယ်ချင်လို့ ရှယ်သွားပြီ နော့် ။
ခေါက်ဆွဲ အစုံသုတ် ချဉ်ငံစပ် တော့မကြိုက်
လို့ ။ မုန့်တီ ချဉ်ငံစပ် ငါးဖယ်ဆုပ်ပါးပါးလေးနဲ့
မောင်ခိုင်မာကလည်း ကျုပ်တို့နယ်မှာ ရန်ကုန်အသုတ်စုံ ဆိုပြီးအမည်တပ်ကာ လာရောင်းတယ်ဗျ။
စားကြတဲ့သူတွေကလည်းပြောကြပါတယ် အသုတ်စုံဆို ရန်ကုန်အသုတ်စုံကမှ ကောင်းတာတဲ့။
လေးခ လေးက ရေးပြသွားဒါ မိုက်ဒဗျာ …
ကျုပ်ဒို့ ညန်မာဒွေ ရှေးအစဉ်အဆက် အစုံလိုဂျင်ခဲ့ဒါ ..
ဟင်းဘွဲ ဘယ်နှစ်ပွဲ ဆိုလားဘဲ …
အိုက်ဒါ … ကြွားဂျင်ဒါလည်း ဟုတ်မယ် …
အစုံစားဂျင်ဒါလည်း ဟုတ်မယ် … (အထင်)
မွေးရာပါ သန္ဒေကို ကမကောင်းတာ.. ခေါက်ဆွဲသုတ်လေးစားပြီး.. လွယ်အိတ်လေးလွယ်ချင်တာ..
ကျွန်တော်တို့နိူင်ငံက ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျှောအဖြစ်များတယ်လေ….။
လူမျိုးတစ်မျိုးစီရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဓလေ့စရိုက်ကို ရေခဲမုန့်နဲ့ ပြောသွားတာ။
ခုရက်ထဲ တရုတ်ပန်းချီကားတစ်ကားကို နိုင်ငံ ၄နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးကျားကွက်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောသွားသလိုပဲ။
ဆိုလိုရင်းကို လိုတိုရှင်း ပြောသွားတဲ့ ကိုခင်ခရဲ့ အတွေးရော အရေးကိုပါ သဘောကျသွားပါတယ်။
ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ကျနော်တို့ တွေးသင့်တယ်ထင်တာပဲဗျ…
ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေသလားလို့ပါ…
နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရှိနေမလားးးး
တကယ်က ကိုယ်တိုင်ကလည်းးး ဘာမှဟုတ်တဲ့လူ မဟုတ်ပါဘူးးးးး။
ချဉ်ချဉ် ငံငံ စပ်စပ် ကောင်းကောင်း များများ ဈေးချိုချို…..အဲ့လိုလေးစားချင်လိုက်တာ….
မန်းလေးမှာ ကျနော်ပြောတဲ့ ၆ ချက်နဲ့ညီတဲ့ ခေါက်ဆွဲဆိုင်များရှိရင် လမ်းညွှန်ပါအုံဗျ……..
ဝမ်း ချုပ် ရင်
အ သုပ် စုံ / အ စုံ သုပ် ကို
လက် နဲ့ နယ် ထား တာ လေး
တစ် ပွဲ လောက် စား လိုက် ရ မှ
ရှော က နဲ ရှော က နဲ
ရှိ တာ က လား
ဖတ်ပြီး အသုပ်စုံ တစ်ကယ်လုပ်စားလိုက်ပါတယ်…
အခုမှပဲ ကိုယ့်ကောင်းကွက်ကိုထင်သာမြင်သာရှိသွားပြီ့့
အသုပ်စုံတောင် ချဉ်ချဉ် ငံငံ စပ်စပ် မှစားချင် တာ
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်သွားပါပီ လေးလေးရယ်
ဘာပဲဘယ်လိုပြောပြော.. ဒီ၂နှစ်အတွင်း.. မြန်မာတွေ ကမ္ဘာတန်းကိုရအောင်ညှိယူနေတာ… တော်တော်မြန်တယ်ထင်မိတယ်..
ခုနတင်အမေရိကားမှာ လိင်တူလက်ထပ်တာကို.. အမေရိကန်တွေအသိအမှတ်ပြုထောက်ခံနှုန်း နှစ်အလိုက်ပြောင်းလာတာကိုကြည့်နေတာ…
အခုဒီနှစ်ဧပြီလစစ်တမ်းအရ.. . လူ၁၀၀မှာ ၅၃ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံသတဲ့..
လွန်ခဲ့တဲ့.. ၉နှစ် ၂၀၀၄က.. ၃၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတာမို့.. ၁၀နှစ်လောက်အသည်းအသန်လုပ်ကြရတာ…
မြန်မာတွေ ၂နှစ်ကျော်လေး.. ဒီခရီးလျှောက်လာတာတော့.. ယူအက်စ်အစိုးရကိုယ်တိုင်.. အံ့သြအသိအမှတ်ပြုတယ်ထင်ပါကြောင်း…
တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ ဒီမိုကရေစီကလည်းလိုချင်သေး ကုလားကိုလည်းမောင်းထုတ် ချင်နေသေး တရုတ်တွေလုပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေလည်းရပ်လိုက်ချင်သေး ဘာသာသာသနာအကြောင်းပြုဥပဒေ လုပ်ကာ သာသနာကလည်းပြုချင်သေး စစ်အစိုးရအနွယ်သမ္မတနေရာမှာလည်း လူလဲလိုက်ချင်သေး
ကွက်တိပဲ ဆရာခရေ… သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဘာမန်…
ရှိသမျှ အကုန် CHANGE ချင်နေတော့တာကိုး…
အဲ… မောင်ကျောက်လည်း ဘာမန်ဆိုတော့ ရွာပြန်ရောက်ရင်…
“ခေါက်ဆွဲအစုံသုတ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ်” စားဦးမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း…
ညွှန့်ဗောင်း အစိုးရ ဖွဲ့မို့ ရှို ..။
်ဲ်အဲ့သည် – ( မြန်မာတွေက ခေါက်ဆွဲအစုံသုတ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ် ကို စားတတ်ကြတာကိုး။) ..ဆိုတာလေးကို
ဒီရွာအတွက်လဲ သတိပြုဖို့ ကောင်းသဗျ…။
ကျုပ်တို့လူမျိုးက ရသာစုံ ၀မ်းစတော့ဆားဗစ်ကို ကြိုက်တတ်သနော….
အပေါ်က ကွန်မင့်လေးကို မနက်က ဆပ်မစ်လိုက်တာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိပြန်ဘူး
အခု မှ ပြန်ဝင်ကြည့် ပြီး ပြန်ရေးဖြစ်တယ်…။
ဒီရက်ပိုင်းရွာဝင်မန့်ရတာ ခက်လိုက်တာ ကိုခင်ခ ရေ…
မြန်မာတွေ စားနိုင်တာကိုက ဂုံယူဇရာ… :eek:
ရေခဲမုန့် ရောင်းနေတာကို ဖတ်ရတုန်းက ဒီအတိုင်းပဲ ဖတ်မိတာ
အောက်က ခေါက်ဆွဲ အစုံသုပ်ကို ဖတ်မိတော့ စားချင်စိတ် ပေါက်လာတာ
မြန်မာ မို့လို့လား ဟင်င်
ကိုယ်ပေးတာထက်ပိုပြီး တန်အောင်ပြန်ယူချင်တဲ့ လူမျိုးဆိုရင်မမှားသလို။
ကိုယ်ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာ မသိတာက ပိုဆိုးနေသလိုပါဘဲ။
ကြိုက် တာ မကြိုက်တာ အပထား ရသလောက်ယူထားဆိုတဲ့ စိတ်တွေက အမြစ်တွယ်နေပြီလေ.။
ဖွင့်ထားတဲ့ စိတ်တံခါးတွေနဲ့ လာသမျှကို လက်ခံတာလား
ကောင်း၏ မကောင်း၏ မရွေးချယ်တတ်တော့တာလား မသိတော့ပါဘူး။
သေချာတာကတော့ ဘာမှ ရေရေရာရာ မရှိတာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဘဲ။
ပိုဆိုးတာက အထက်ကလူ ကြိုက်အောင် ဖားချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတွေက ပြူတစ်ပြူတစ်ထွက်နေတာကို